Ejipta: Bilaogera misalasala (2009) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Septambra 2019 3:42 GMT
Mitaky tsy fitanilana, fandeferana, ary fahamarinana ny fisalasalana. Nisafidy ny hisalasala i Mona Eltahawyary ary mangataka amin'ny olona mba hisafidy vahaolana i Amr Gharbeia.
Ao amin'ny lahatsorany: “On Fence Toughtest Stance in Mideast“, nilaza i Mona Eltahawy fa:
Mora loatra ny mitanila amin'ny fifandirana any Atsinanana Afovoany. Vitsy ny faritra hafa eran'izao tontolo izao manome aingam-panahy ny fitiavana toy izany na mamela toerana kely ho an'ny fisalasalana. Ho an'ny maro, fandinihana aoriana fotsiny amin'ny zo ho terakan ny fisafidianana: Raha Arabo ianao dia mandehana manatevin-daharana ny fihetsiketsehana “Afaho Palestiniana”; ary raha Jiosy ianao dia mandehana miditra amin'ny diabe Vonjeo i Israely.
Aza adinoina fa azonao atao foana ny manipy an'Andriamanitra ao anaty fifangaroana. Takio ny toeranao masina ary tsy maintsy hanana hatezerana saziana ara-pivavahana ianao mba hanamafisana ny hatezeranao.
Nanontany izy avy eo hoe:
inona no ilaina ny fakana andaniny raha samy very ny roa tonta (andaniny sy ny ankilany)? Ny tena fanamby momba an'i Afovoany-Atsinanana dia ny fisalasalana sy ny fahatakarana fa amin'ny ankamaroan'ny toko amin'ity ady tsy mety mitsahatra ity, dia ny sivily no tena voa mafy indrindra.
Ny torohevitra tsara indrindra tsy mitongilana azony omena dia:
Manomboka amin'izany fisalasalana izany, jereo tsara ny momba ireo sivily Israeliana sy Palestiniana ary anontanio ny andraikitr'ireo mpitondra ho an'ny vahoakany.
Lasibatry ny Hamas sy Israely ireo sivily ao Gaza.
Ilay voalohany (mpitondra) sahirana kokoa amin'ny tifitra balafomanga tsy mahomby any atsimon'i Isiraely, izay nikendren'izy ireo ny andian'olona izay ampangain'izy ireo ankehitriny fa Israely manenjika loatra ny sivily any Gaza.
Nanomboka ny sazy fanapoahana baomba sy fanafihana an'i Gaza i Israely izay hampiasaina ho porofo farany fa herisetran'ny mpifanolo-bodirindrina izany. Ny fihetsik'izy ireo dia hamadika an'i Hamas ho maherifo tanteraka tsy mendrika azy ireo ary mety hiteraka onjanà daroka baomba vaovao tsy voahevitra amin'ny sivily Israeliana.
Ary inona no anton'izany rehetra izany?
Ary mampitandrina izy fa:
Ho antsika avy any amin'ny faritra, ny zavatra mora indrindra dia ny manaraka ny zontsika amin'ny fizokiana fa ny zavatra henjana indrindra dia ny mihorakoraka hoe “Ampy” amin'ny fotoana izay toa vonona hifamono ny roa tonta ary rehefa manome antoka ny fiampangana ho filavoana ny mitsikera ny andaniny.
Ary farany dia nanantitrantitra izy hoe:
mijanòna amin'izany fisalasalana izany ary mamadiha izany ho amin'ny fandriampahalemana.
Mijanòna amin'izany fisalasalana izany miaraka amiko ary mihiaka ho an'ny fitsaharan'ny ady.
Ampy ny herisetra.
Namorona fitsapan-kevitra tao amin'ny bilaoginy i Amr Gharbeia, mangataka amin'ireo mpifidy mba hisafidy ny iray amin'ireo safidy sivy hampitsaharana ny fifandirana ary mampiseho ny vokatra fa maniry ny fandriampahalemana sy ny demaokrasia fotsiny ny ankamaroan'ny olona:
Miala ireo teratany jiosy, nanjary firenena silamo i Palestina, ary raisina ho Dhimmi ireo jiosy izay mijanona ao (vato 50/ 26%)
Miala ireo teratany jiosy, nanjary firenena silamo i Palestina, ary raisina ho olom-pirenena sokajy faharoa ny Jiosy izay mijanona ao (vato 16/ 8%)
Miara-mipetraka any Palestina firenena demaokratika ny mpitsoa-ponenana Arabo sy ny Isiraeliana – tombontsoa manokana ho an'ny Arabo (vato 66 / 34%)
Mametraka ny fanjakana Palestiniana araka ny fifanarahan'ny Firenena Mikambana tamin'ny taona 1937 (vato 10/ 5%)
Mametraka ny fanjakana Palestiniana araka ny fanapahan-kevitry ny vondrona iraisam-pirenena talohan'ny taona 1967 ankoatra ny fiverenan'ny mpitsoa-ponenana (vato 23/ 12%)
Mametraka ny fanjakana Palestiniana araka ny fanapahan-kevitry ny vondrona iraisam-pirenena talohan'ny taona 1967 – ifampidinihana amin'ny manaraka ny fiverenan'ny mpitsoa-ponenana (vato 15/ 8%)
Manorina firenena roa; iray any Morondrano Andrefana ary iray any Gaza (vato 3/ 2%)
I Jordania no manara-maso ny Morondrano Andrefana, i Ejipta no mifehy an'i Gaza, ary mitady tanindrazana hafa ny mpitsoa-ponenana (vato 4/ 2%)
Terena handao an'i Israely ny Arabo (vato 9 / 5%)